Xildhibaano badan oo kusoo laabtay Muqdisho iyo olole xoogan oo caawa – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
23rd March 2018 A warsame Af Soomaali 0
Magaalada Muqdisho waxaa shalay iyo maanta soo gaaray Xildhibaano katirsan Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya kuwaa oo mudooyikii ugu dambeeyay dalka dibadiisa ku sugnaa.
Xildhibaanada Mooshinka ka wada Gudomiyaha Baarlamaanka ayaa dhawaan sheegay in ay gaarayaan in ka badan 180 Magaalada Muqdisho waxaa shalay iyo maanta soo gaaray Xildhibaano katirsan Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya kuwaa oo mudooyikii ugu dambeeyay dalka dibadiisa ku sugnaa.
Gudoon ka Baarlamaanka ayaan wali shaacin xiliga la qabanayo kulanka Baarlamaanbka ee Mooshinka lagu horgeenayo, waxaan sidoo kale wali kala cadeyn halka lagu qaban doono kulankan oo ah mid xasaasi ah. , halka Xildhibaanada Jawaari taageersan iyana sheegayaan in ay heestaan codad ku filan ay ku difaaci karaan Jawaari.
Gaari Waday Hilbo lagu sheegay kuwa dadka Oo Muqdisho lagu qabtay Halkee lagu hayaa gaariga?